यस्तो रहेछ किरातदेखि राणा कालसम्मको शासन-प्रशासन:: Naya Nepal
लिच्छवि कालमा राज्यलाई विभिन्न प्रान्तमा विभाजन गरिएको रहेछ। प्रान्त प्रमुखलाई ‘सामन्त’ भनिन्थ्यो, जसको नियुक्ति राजाले गर्ने परिपाटी रहेछ।नेपालको शासन पद्धतिको इतिवृत्तान्त खोज्दा सन् २५० देखिको भेटियो। किरात कालका भेटिएसम्मका लेखहरूबाट के थाहा भयो भने, किरात कालमा नेपालको शासन निकै विकेन्द्रित रहेछ। किरात कालीन प्रशासनका दुई वटा तह थिए– केन्द्र र थुम। अहिले जुन प्रशासनिक निकायलाई जिल्ला भनिन्छ, तिनताका थुम भनिन्थ्यो। त्यसपछिको लिच्छवि कालमा केन्द्र, थुम र पाँचली गरी प्रशासन तीन तहबाट सञ्चालन हुन लाग्यो। पाँचली भनेका अहिलेका स्थानीय तहका वडा जस्ता हुने रहेछन्। प्रधानमन्त्रीलाई ‘महासंघ दण्ड नायक’ भनिन्थ्यो, अर्को तहलाई ‘गरु’ भनिंदो रहेछ र तेस्रो तह धर्मसम्बन्धी मन्त्री ‘महाहक अमात्य’ हुने रहेछ। अर्को पद सर्व डण्डनायक अर्थात् प्रधानसेनापति हुन्थ्यो। सिङ्गो राज्यलाई विभिन्न प्रान्तमा विभाजित गरिएको रहेछ। प्रान्त प्रमुखलाई ‘सामन्त’ भनिन्थ्यो, जसको नियुक्ति राजाले गर्ने परिपाटी रहेछ।सामन्तहरू अन्तर्गत रहने अधिकारी विभागीय प्रमुख हुन्थे। लिच्छवि राजाहरूमा मानदेव र अंशुवर्मालाई सर्वश्रेष्ठ ठानिन्छ।पाँचलीमा चुनावबाट छानिएका सदस्यहरूबाट गठित सभासँग पाँचली गाउँको प्रशासन हेर्ने र मुद्दा मामिला छिन्ने अधिकार निहित हुँदो रहेछ। लिच्छवि राज्य सत्तालाई मल्ल कालले बदल्यो। मल्ल राजाहरूले नेपालमा लामो समय राज्य गरे। अरी मल्लले १३औं शताब्दीमा काठमाडौं उपत्यकालाई एकीकृत गरेका थिए। फेरि लगभग दुई सय वर्षमा यक्ष मल्ले तीन टुक्रा पारेछन्। मल्ल राजाहरूमा पनि जयस्थिति मल्ल र प्रताप मल्लको विशेष नाम छ।
मल्ल कालमा कर्मचारीहरूलाई पात्र वा महापात्र भनिन्थ्यो। युद्धपति, केन्द्र नायक भनिन्थ्यो। कुमारी चोक अड्डाबाट व्यवस्थित तरिकाले लेखा राख्ने र जाँच्ने चलन मल्ल कालदेखि नै शुरु भएको रहेछ। मल्ल राज्यकालमा नेपालमा प्रशासन अत्यन्त केन्द्रीकृत रहेको टिप्पणी पनि गरिन्छ। वि.सं. १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकामा जित हासिल गरेपछि मल्ल राज्य अस्तायो। पृथ्वीनारायण शाहले जनताको कुरो सुन्ने र शासन सत्ता सञ्चालन गर्न परामर्श लिन र राज्यसत्तालाई परिपक्व गराउन ‘थरघर’ भन्ने एउटा निकाय बनाएका थिए। पछि गएर त्यो भारदारी सभामा रूपान्तरण भएको थियो। राणाकालीन प्रशासनमा श्री ३ महाराज सर्वेसर्वा हुन्थे। उनी अन्तर्गत मुख्तियार वा चिफसाहेब रहन्थे। त्यसमुनि जङ्गीलाठ, लाठसाहेब र तीन जना कमाण्डिङ जनरल नै त्यसबेला अहिलेको मन्त्रिमण्डल जस्तो हुन्थ्यो। ती ६ जना प्रधानमन्त्रीकहाँ दैनिकजसो जम्मा भई राजकाजबारे सल्लाह गर्थे। तीमध्ये नै एकजना हजुरिया जनरल पनि पर्थे। ती बैठकमा आवश्यक परेको बखत मुलुकी अड्डा, खड्ग निशाना र सरोकारवाला अड्डाका तालुकवाला र हाकिमहरू पनि बोलाइन्थ्यो। अन्यथा हजुरिया जनरलले बैठकका निर्णय टिपेर अरुहरूलाई बोध वा खड्गनिशाना गराउने चलन थियो। रोलवाला राणाजीमध्ये माथिल्ला १३ जनाको तलब फरक–फरक थियो। मुख्तियारले प्रधानमन्त्रीपट्टि ५० हजार र ३० हजार गरी ८० हजार रुपैयाँ खान्थे भने कमाण्डिङ जनरल चार जनाले ५०/५० हजार रुपैयाँ खान्थे। लेफ्टिनेन्ट जनरल २ जनाले १५/१५ हजार, मेजर कर्णेल २ जनाले १२/१२ हजार रुपैयाँ खान्थे। कर्णेल २ जनाले रु. ६ हजार ४०० र लेफ्टिनेन्ट कर्णेल २ जनाले रु. ३६०० खान्थे। यो पारिश्रमिक मासिक होइन, वार्षिक हो। कुनै विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री वा मुख्तियारले अरुहरूको राय लिनुपरेमा मुख्तियारको दलान वा प्रधानमन्त्रीको भुइँ बैठकमा मिटिङ बस्दो रहेछ। त्यस्ता बैठकमा जङ्गीपट्टि मेजर र निजामतीपट्टि मीर सुब्बा सम्मलाई सामेल गरिंदो रहेछ। ती दर्जा पुगेका कर्मचारी यस्ता सभामा सरिक हुन पाउने हुँदा भारदारमा गनिंदा रहेछन्। त्यस्ता जमघटलाई भारदारी भनिन्थ्यो।
राणाकालमा प्रधानमन्त्रीकै इच्छामा सबै राजस्व खर्च हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको आम्दानी कति हुन्थ्यो भन्ने ठेगान नै नहुँदो रहेछ। उनको हुकुमले मूल ढुकुटीबाट जति पनि झिक्न सकिने। उनले हिसाब राख्न वा कसैलाई हिसाब बुझाउन पनि नपर्ने। जागिर नपाउने सत्र भाइ रोलवाला (धीरशमशेरका छोरा) ले आफ्नो स्तर अनुसारको भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको रहेछ। जङ्गीतर्फका सबै प्रमुख अड्डाहरूमा रोलवाला राणाहरू हुन्थे भने निजामतीतर्फ पनि महत्वपूर्ण अड्डाका तालुकवाला र डाइरेक्टर जनरल सत्र भाइ राणाका सन्तानले नै पाउँथे। सात भाइ राणाका सन्तान त कोही झाङ्गाझोलीतिर कोही पोखरातिर लाखापाखा लागेछन्। राणाहरू बाहेक अरु सब जङ्गी र निजामती कर्मचारीलाई दुनियाँदार भनिंदो रहेछ। दुनियाँदारमध्ये पनि राजा, रजौटा, चौतारियाहरूको स्थान अलि माथि थियो। यिनलाई नयाँ भारदार पनि भनिन्थ्यो।
अभावपछि औषधि ल्याउने हतारो
काठमाडौं : कोभिड १९ का बिरामीलाई दिइने रेम्डेसिभर औषधि चरम अभाव भएपछि बल्ल सरकारले आयातको अनुमति दिएको छ। पहिलोचोटि ल्याइएको ६ हजार भाएल औषधि खपत भइसकेको छ।औषधि व्यवस्था विभागले तीन वटा फर्मलाई औषधि आयात तथा बिक्रीको अनुमति दिएको हो। तिनमा यती फार्मसेप्टिकल डिस्ट्रिब्युटर प्रालि, सिनर्जी प्रालि र हेटेरो ल्याबस् लिमिटेड छन्। तर, तीन वटै फर्मसँग रेम्डेसिभर औषधि जगेडा छैन। ल्याउन समयमै अनुमति नपाउँदा बजारमा अभाव भएको तीन वटै फर्मका प्रतिनिधिको भनाइ छ।अब सबै कोभिड अस्पतालले चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम खरिद गरी उक्त औषधि प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले चिकित्सकको सिफारिसअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले अनुमतिप्राप्त फर्मबाट खरिद गरेर प्रयोग गर्न सकिने बताएका हुन्। जबकि किन्न बजारमा औषधि पाइन्न। विभागले खरिदका लागि समयमा अनुमति नदिँदा बेलैमा ल्याउन नसकिएको यती फार्मसेप्टिकलका प्रभुराज यादवले बताए। ‘एक पटक ल्याएका थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यो सकियो। बीचमा ल्याउन अनुमति मागेको, विभागले दिएन। भर्खर स्वीकृति दिएको छ। केही दिनमा आउँछ।’
विभागले अहिले तीनवटै फर्मका लागि २ हजार भाएलका दरले ल्याउन अनुमति दिएको छ। औषधि आउन अझै तीन साता लाग्ने हेटेरो ल्याबस् लिमिटेडका प्रतिनिधि विजय अग्रवालले बताए। ‘हामीलाई भर्खर अनुमति आएको छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘ल्याउने ठाउँमा पनि औषधिको माग ज्यादा छ। कम्तीमा तीन साता लाग्छ।’ पहिलो पटक ल्याएको औषधि नसकिँदै ल्याउन अनुमति माग्दा नदिएकाले अहिले अभाव भएको सिनर्जी प्रालिका प्रतिनिधि मधु पौडेलले बताए। औषधि ल्याउन मागअनुसार अनुमति नदिएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले कम्तीमा १० हजार भाएलको अनुमति माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यतिको अनुमति दिए उत्पादन गर्ने कम्पनीले नेपालका लागि छुट्टै औषधिको ब्याच बनाउँथ्यो। र, सहजै पाइन्थ्यो। २ हजार माग गर्दा अरूलाई उत्पादन गरेकोबाट कटाएर दिनुपर्ने भएकाले समस्या हुन्छ।’
विभागले तीनवटा फर्मलाई २ हजार भाएलका दरले ल्याउन अनुमति दिएको छ। जम्मा ६ हजार भाएलले एक बिरामी बराबर ६ पटक प्रयोग गर्दा १ हजार जनालाई मात्र पुग्छ। अघिल्लो पटक पनि ६ हजार भाएल मात्र खरिद गर्न अनुमति दिइएको थियो।
के हो रेम्डेसिभर ?
रेम्डेसिभर ‘एन्टी भाइरस’ औषधि हो। विश्वमा कोभिडविरुद्ध यो औषधि प्रयोगकै चरणमा छ। डब्लूएचओले पनि यसलाई परीक्षणका रूपमा राखेको छ। यसको केही ट्रायल पनि राम्रो देखिएको विज्ञहरूले बताएका थिए। तर, भर्खरै डब्लूएचओले धेरै प्रभावकारी भने नभएको रिपोर्ट दिएको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का पूर्वडिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले बताए। तर, विश्वभर अन्य औषधिको विकास नहुँदा यही औषधिको प्रयोग भइरहेको छ। डा. अग्रवाल नेपालमा यसको प्रयोगको कमी भएको बताउँछन्। डा. अग्रवालका अनुसार निमोनिया हुँदासम्म यसले काम गर्छ। त्यसैले निमोनिया हुनुअगावै यसको प्रयोग भएमा बिरामीको अवस्था राम्रो बन्न सक्ने उनले बताए। पोजिटिभ आउनेबित्तिकै दिए बिरामीलाई सहज हुने उनले बताए। रेम्डेसिभरको समयमै प्रयोगले मृत्युदरमा पनि कमी ल्याउन सक्ने भएकाले सबै बिरामीले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो औषधि सबै बिरामीले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा अभाव छ। संक्रमण वृद्धि भइरहेको अवस्थामा औषधि आयात गर्न निश्चित मात्रा तोकिनु हुँदैन। क्वालिटीको औषधि ल्याउने तर पर्याप्त ल्याउन विभागले अनुमति दिनुपर्छ।’ यसको धेरै प्रयोग गर्न सकिए मृत्युदरमा कमी ल्याउन सकिने उनले बताए।
अहिले संसारभर यो औषधि ट्रायलमै भएकाले यसको आयात निश्चित गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए। ‘यो कोरोनाकै औषधि भनेर प्रमाणित भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘परीक्षणका लागि हामीले निश्चित मात्रामा मगाएका हौँ। धेरैलाई औषधि नै यही हो भन्ने लागेको छ। तर, होइन।’ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले अध्ययन गरेर यो कोरोनाकै औषधि हो भनेर प्रमाणित गरेपछि मात्रै निर्धक्क प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए। ‘एनएचआरसीले औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न नभनेसम्म हामीले अध्ययनकै रूपमा प्रयोग गर्ने हो। अहिले प्रयोग भइरहेको सबै अध्ययनकै रूपमा जान्छ,’ डा. अधिकारीले भने।